Ụlọ Castletown - IntoKildare
Castletown, dị ka ụlọ mbụ na ụdị ụdị Palladian nke Ireland, bụ akụkụ dị mkpa nke ihe owuwu ụlọ nke Ireland. Na -eju anya na ọmarịcha ụlọ a ma were oge inyocha ogige ntụrụndụ narị afọ nke 18.
Ewubere n'agbata 1722 na c.1729 maka William Conolly, Onye Ọkà Okwu nke Irish House of Commons, E mere Castletown House iji gosipụta ike nke onye nwe ya yana ka ọ bụrụ ebe egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -eme nke ọma.
Njem nlegharị anya na ntuziaka nke ụlọ dị ma enwere ọtụtụ mmemme enyi na enyi n'afọ niile.
Ogige ntụrụndụ na ije osimiri na narị afọ nke iri na asatọ e weghachiri ọhụrụ na-emeghe kwa ụbọchị n'afọ niile. Enweghị ego nnabata iji jee ije ma legharịa anya na mpaghara ahụ. A na -anabata nkịta, mana ekwesịrị idobe ya na isi ma agaghị anabata ya n'ime ọdọ, ebe enwere anụ ọhịa.
Ihe nzuzo mpaghara: Ogige Biodiversity Castletown House bụ ebe zuru oke iji weta ụmụaka. Site n'okporo ụzọ akụkọ na-atọ ụtọ na mmụta, mpaghara egwuregwu na ọtụtụ ihe inyocha, ọ ga-amasị ndị ọbịa na-eto eto na ndị na-eto eto!
Ihe nketa na akụkọ ihe mere eme, Outdoors, Useslọ & Ubi, Na-eje ije & Hiking, Nature & Anụ ọhịa, Ihe Nwere Ike Ime, Celbridge
Celbridge, Obodo Kildare, Ireland.
Mọnde - Sun: 10am ruo 5pm
Maka oge njem na ụgwọ nnabata lee webụsaịtị. Mbanye n'efu na mpaghara ogige narị afọ nke 18 eweghachiri, na -emeghe kwa ụbọchị n'afọ niile.